Tahaka ny ahoana ny andriamanitra? | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Milaza amintsika ny Hebreo 2,14 fa raha tsy misy fahamasinana dia "tsy hisy olona hahita ny Tompo"; «... Nefa toy ny masina izay niantso anao, dia tokony ho masina koa ianao amin'ny fiovanao rehetra» (1 Petera 1,15-16; Levitikosy 3). Tokony "hizara ny fahamasinany" isika (Heb. 12,10). Andriamanitra dia fitiavana ary feno famindram-po (1 Jaona 4,8: 112,4; Salamo 145,8: 1;). Ny andalana etsy ambony ao amin'ny Jaona dia milaza fa ireo izay mahalala an'Andriamanitra dia azo fantarina amin'ny fiahiany am-po ny hafa satria Andriamanitra dia fitiavana. Ny fitiavana dia namelana tao anatin'ny andriamanitra "talohan'ny nananganana an'izao tontolo izao" (Jaona 17,24) satria ny fitiavana dia toetran'Andriamanitra.